दादको समस्याले सताएको छ ? यसरी जोगिनुस् |
गृह पृष्‍ठ खबर दादको समस्याले सताएको छ ? यसरी जोगिनुस्
प्रकाशित मिति : २०७८ आश्विन २७ , बुधबार ०६:२३
अनुहार सुन्दर तर त्यहिमाथि निस्केको फुस्रो दादले रुपै बिगारिदिएको हुन्छ । कतिपयको शरीरका विभिन्न भागमा निस्किएको दाद । यसले शरीरको सौन्दर्यमा आघात त पार्छ नै बढदै जाँदा थप समस्याहरु नित्याउँदै जान्छ ।
छालारोग विशेषज्ञ डा सविना भट्टराईले दादको समस्या र जोगिने उपाय बारेमा केही टिप्स दिएकी छन् ।
हेरौँ उनका टिप्सहरु:
दाद भएको ठाँउमा खराब औषधि परयो भने घाउ पाकेर पिप आउने हुन्छ, त्यसका साथै बढ्ने प्रक्रिया तीव्र हुन्छ, चहरयाउने र मान्छे हिँडडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ । कपालको दाद विद्यालय जाने बालबालिकामा बढी हुन्छ ।
दाद हुँदा औषधि नमिसाइएको सादा साबुनले नुहाउनु पर्छ ।
नुहाएपछि कटनको कपडाले राम्रोसँग पुछेर सुक्खा बनाउने ।
चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र औषधि प्रयोग गर्ने ।
जथाभावी औषधि प्रयोगले साधारण औषधिले ठीक हुने ढुसी पनि निको नहुने क्रम बढेको छ ।
बाह्य संक्रमण नजुधोस् भनेर सचेत रहने ।
आफूखुसी उपचार कहिल्यै पनि नगर्ने ।
चिकित्सकलाई भेट्नुअगावै जथाभावी औषधि प्रयोग गर्दा सामान्य किसिमको फंगल्सको संक्रमणमा पनि लामो समय औषधि खानुपर्ने हुन्छ । – नेपाली हेल्थ
पछील्लो पोस्ट यी हुन् स्तनपान सम्बन्धी १० रोचक तथ्य
अगिल्लो पोस्ट डेनमार्क कतार विश्वकपका लागि छनौट
रुपन्देहीको तिलोत्तमाका विद्यालयमा स्टाफ नर्स नियूक्त